တနင်္သာရီမြို့နယ်တွင် ဒုတိယအကြိမ် မြစ်ရေထပ်ကြီး၊ ကျောင်း ၁၆ ကျောင်း ပိတ်ထားရ၊ လမ်းအချို့ရေေ?? - Yangon Media Group
တနင်္သာရီ၊ သြဂုတ် ၃
တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး မြိတ်ခရိုင် တနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်း၌ မိုးများအဆက် မပြတ်သည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေမှု ကြောင့် တနင်္သာရီမြစ်ရေသည် သြဂုတ် ၂ ရက်နေ့ ည ၁၂ နာရီတွင် မြို့နယ်မြစ်ရေ အမှတ်သည် (၂၂ ပေ ၉ လက်မ) အထိ ပြန်လည် တက်လာသဖြင့် စိုးရိမ်ရေအမှတ် (၁၇) ပေ ထက် (၅ ပေ နှင့် ၉ လက်မ) ကျော်လွန်နေပြီဖြစ်၍ (ဒုတိယအကြိမ်) ပြန်လည်၍ မြစ် ရေထပ်ကြီးနိုင်ပြီး ဒေသခံများ၏ အတွေ့အကြုံအရ ၎င်းမြစ်ရေ အနေအထားသည် ပို၍ကြီးနိုင်ဖွယ် ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုနေသည်။
(ပထမအကြိမ်) တနင်္သာရီ မြစ်ရေသည် ဇူလိုင် ၁၅ ရက်မှ ၂၂ ရက်အတွင်း အန္တရာယ်ရေ အမှတ် အထက် ၂၆ ပေ ၃ လက်မအထိ ကျော်လွန်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး (၂၁ ပေ)သို့ မြစ်ရေလျော့ကျရပ်တန့် နေခဲ့ရာ သြဂုတ် ၁ ရက်နှင့် ၂ ရက် နေ့တို့တွင် မိုးများအဆက်မပြတ် သည်းထန်စွာရွာသွန်း မှုကြောင့် (ဒုတိယအကြိမ်) မြစ်ရေထပ်ကြီး လာခြင်းဖြစ်ပြီး မြိတ်မြို့-တနင်္သာရီ- ကော့သောင်းလမ်းအပိုင်း အောက်ကင်းအရှေ့ကျေးရွာကီလိုမီတာတိုင်အမှတ် 79Km အနီးကားလမ်း ပေါ်တွင် အနက်ခြောက်လက်မ၊ အရှည်ပေ ၁ဝဝ ကျော်ခန့်၊ လယ် တောင်ယာကျေးရွာ ကီလိုမီတာတိုင် အမှတ် 83Km အနီး ကားလမ်းမ ပေါ်တွင် အနက်တစ်ပေ၊ အရှည် ၂ဝဝ ပေခန့် မြစ်ရေကျော်လွန် ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်း ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် မော်တော် ယာဉ်များ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာ၍ရနေသေး ကြောင်း လမ်းဦးစီးဌာနမှသိရသည်။
(ပထမအကြိမ်) တနင်္သာရီ မြစ်ရေကြီးစဉ် ရေဘေးသင့်အိမ် ထောင်စု ၁၁ဝ၉ စုတို့မှ လူဦးရေ ကျား ၂၈၈၄ ဦး၊ မ ၂၇၇၄ ဦး၊ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၅၆၅၈ ဦးတို့ သည် မြို့နယ်အတွင်းရှိ ယာယီ ရေဘေးကယ်ဆယ်ရေးစခန်း ၁၁ ခု၌ ခိုလှုံနေကြရပြီး ဇူလိုင် ၁၅ ရက် မှ ယနေ့သြဂုတ် ၃ ရက်အထိ နေအိမ်များသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့နိုင် ခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရှိရသည်။ ယခု(ဒုတိယအကြိမ်) မြစ်ရေ ထပ်ကြီးခြင်းကြောင့် တကူကျေးရွာ အုပ်စုမှ အမက(ခွဲ)စပါယ်ကုန်းရွာနှင့် သိန္ဓောကျေးရွာအုပ်စု၊ အမက- ဘန်းပြည့်အရှေ့ရွာတို့ကို ယာယီထပ်ပိတ်လိုက်ရသဖြင့် စုစုပေါင်း ကျောင်း ၁၆ ကျောင်း ယာယီပိတ် ထားရကြောင်း မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးမှ သိရှိရသည်။
အမေရိကန်တွင် လူဝင်မှု ဥပဒေအရ ဖမ်းဆီးခံရသူ ခိုလှုံ ကလေးငယ် ၁၉ဝဝ ကျော် တရားရုံး အမိန့်ဖြင့် ပြန??
ဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းပါ ရှစ်ဦးကို နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင်တရားရုံးတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ရုံးထု??
ဟာဇက်မှာ ပေါင်သန်း ၁ဝဝ မက ထိုက်တန်ကြောင်း ဆာရီပြောဆို
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ပါပူဝါပြည်နယ်တွင် ထောင်ဖောက်ပြေးခဲ့သည့် အကျဉ်းသား ၂၅၀ ကျော်ကို အာဏာပိုင်များလိုက်လံရှာဖွေနေ